Umgaqo-nkqubo wabucala weWebhusayithi »I-Hodges University Admissions
Enkosi ngokundwendwela iwebhusayithi yeHodges. IYunivesithi yaseHodges ilandela yonke imigaqo kunye nemigaqo njengoko kufunwa yimithetho yaseFlorida, imithetho yase-US yase-US, kunye noMmiselo woKhuseleko lweDatha Jikelele (GDPR). IYunivesithi yaseHodges inokufumaneka kwi-Intanethi apha www.hodges.edu. Sikwanendawo yokuhlala kwikhampasi eFort Myers: 4501 Colonial Blvd., Fort Myers, FL 33966.
Indawo yethu inamanyathelo okhuseleko endaweni yokukhusela ilahleko, ukusetyenziswa gwenxa, kunye / okanye ukuguqulwa kolwazi kulawulo lwethu. Senza konke okusemandleni ukwenza imizamo efanelekileyo yokomzimba, elektroniki kunye neyolawulo ukukhusela ulwazi esiluqokelela kwi-intanethi. Nangona kunjalo, umgaqo-nkqubo wabucala wewebhusayithi kaHodges awenzelwanga ukuba uthathwe njengesithembiso sesivumelwano.
Siqokelela idatha esibonelela ngokuzithandela malunga neendwendwe zethu kwiwebhusayithi ngokudala iakhawunti, ukufaka isicelo kunye neefom zonxibelelwano ezingeniswe kule ndawo.
Ukongeza, sisebenzisa idatha yokulandelela iwebhusayithi ukubonelela ngamava omsebenzisi amahle kakhulu. Sikwasebenzisa ikuki kwiwebhusayithi yethu ukuqondisa kunye nokulungisa ulwazi ngokusekwe kwindlela yakho yokungena kule ndawo. Le ndawo ikwaqokelela ulwazi lwezithuthi kunye nolwendwendwe olufana nedilesi ye-intanethi kunye nedilesi ye-intanethi yekhompyuter oyisebenzisayo ngokusebenzisa izixhobo zohlalutyo lwewebhu kunye nezixhobo zokulandela umkhondo. Ulwazi oluqokelelweyo lolokusetyenziswa ngaphakathi kuphela ukuxhasa ubhaliso lwabafundi, ukuphendula imibuzo yabatyeleli bewebhusayithi, kunye nohlalutyo lwewebhusayithi.
Ukuba ubeka ingxelo kuyo nayiphi na into kwiwebhusayithi yethu, uthumela ngokuzithandela idilesi yakho ye-imeyile kunye nolunye ulwazi. Olu lwazi luya kusetyenziselwa ukuthumela iinkcukacha zakho kwindawo yethu ngokungqinelana nokusetyenziswa rhoqo. Ukuba ungathanda ukuba ulwazi lwakho lususwe, nceda ucele ukususwa ngokuthumela i-imeyile lumela@hodges.edu. Asisokuze sithengise okanye sichaze ulwazi lwakho kubantu besithathu. IYunivesithi yaseHodges iyangqinelana nemigaqo yangaphakathi, yaseburhulumenteni, kunye neyommandla elawula ukuqokelelwa kunye nokugcinwa kolwazi lomntu. Unokukhetha ukuphuma kwiiNtengiso zikaGoogle zoMsebenzi weNtengiso, useto lweeNtengiso zikaGoogle, useto lweNtengiso lweeapps, okanye ezinye iindlela ezikhoyo. Ukuba ungathanda ukukhubaza ukulandelwa kwewebhusayithi, nceda uhlengahlengise useto kwisikhangeli sakho ukubhloka ukulandela umkhondo.
Ukuqhagamshelana nezixhobo zangaphandle ze-Intanethi, kubandakanywa iiwebhusayithi, zinikezelwa ngenjongo yolwazi kuphela; Abenzi ukuvuma okanye ukuvunywa yiYunivesithi yaseHodges ngayo nayiphi na imveliso, iinkonzo, okanye izimvo zombutho, umbutho okanye umntu. IYunivesithi yaseHodges ayithwali xanduva ngokuchaneka, ukuba semthethweni, okanye umxholo wesiza sangaphandle okanye esiya kulwalamano olulandelayo. Nxibelelana nesiza sangaphandle ukuze ufumane iimpendulo zemibuzo malunga nomxholo.
Lonke ulwazi kwiwebhusayithi yethu lubonelelwa ngeenjongo zolwazi kuphela. IHodges ayikukhuthazi iinkonzo kuwe ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu. IiHodges zigcinwe zingenabungozi kuzo naziphi na iingxaki ezinokuvela ngokusekwe kulwazi olufumaneka kwiwebhusayithi yethu.
Iwebhusayithi yethu inokuhlaziywa nangaliphi na ixesha. Iinkqubo zethu zesidanga kunye neenkqubo zoncedo lwezezimali zinokuhlengahlengiswa okanye zitshintshwe nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso sangaphambili.
Ngokubanzi, iwebhusayithi yeHodges yenzelwe ukuba isetyenziswe ngabantu abadala, ngaphandle kokuba ibhalwe ngokukodwa ebantwaneni. UHodges akaqokeleli esazi ulwazi lwabantwana abangaphantsi kweminyaka eli-13. Ukuba sifumanisa ukuba siqokelele ulwazi lobuqu lomntwana ongaphantsi kweminyaka eli-13 ebengalunikwanga ngokuzithandela, siya kuyicima loo datha kwiinkqubo zethu.
Zonke iinkcukacha eziqulathwe kule webhusayithi zinamalungelo obunikazi phantsi koMthetho weLungelo lokushicilela ka-1976. Awunakusebenzisa nasiphi na isiqulatho kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho: kwimifanekiso, kwidatha ye-faculty, okanye kwilogo ngaphandle kwemvume ebonakalayo evela kwiYunivesithi yaseHodges.
Ukuba ungumntu ngaphakathi kwi-EU kwaye unxibelelana neHodges kwimeko yesi Saziso, i-GDPR ibonelela ngala malungelo alandelayo. Ukusebenzisa naliphi na kula malungelo, nceda unxibelelane neGosa lethu loKhuseleko lweDatha eGloria Wrenn, imisebenzi@hodges.edu..
Yaziswa-ukuqokelela kunye nokusetyenziswa kwedatha yakho echazwe apha;
Cela ukufikelela okanye ukulungisa idatha engachanekanga egcinwe ngawe;
Cela ukuba idatha yobuqu icinywe xa ingasafuneki okanye ukuba ukuqhubekeka akukho semthethweni;
Injongo yokulungiswa kwedatha yobuqu ngeenjongo zokuthengisa okanye ngenxa yezizathu ezinxulumene nemeko ethile;
Cela isithintelo sokuqhubekeka kwedatha yobuqu kwiimeko ezithile;
Fumana idatha yakho yobuqu ('ukuphatheka kwedatha');
Isicelo sokungabi phantsi kwesigqibo esisekwe kusetyenziso oluzenzekelayo lwedatha yobuqu, kubandakanya neprofayile.
Idatha yobuqu iya kwenziwa kuphela xa umthetho ukuvumela ukuba kwenzeke oku. Ngamanye amaxesha, iiHodges zinokubonelela ngolwazi oluthe kratya malunga nokusebenza kwayo kwisaziso sayo esongezelelweyo okanye esahlukileyo. Eyona nto iqhelekileyo, idatha yobuqu iya kuqhutywa yiHodges kwezi meko zilandelayo:
Apho usinike khona imvume yakho.
Ukuze uzalisekise uxanduva lweHodges kuwe njengenxalenye yesivumelwano sakho sengqesho okanye ukubhaliswa.
Apho iHodges ifuna ukuthobela uxanduva olusemthethweni (umzekelo, ukufumanisa okanye ukuthintela ulwaphulo-mthetho kunye nemimiselo yezemali).
Apho kufuneka khona ukuba iimfuno ezisemthethweni zikaHodges (okanye ezomntu wesithathu) kunye nemidla yakho kunye namalungelo asisiseko angagqithi kwimidla.
Ukukhusela umdla obalulekileyo wesifundo sedatha okanye somnye umntu (umzekelo, kwimeko kaxakeka kwezonyango).
Ukuze senze umsebenzi owenziweyo kuluntu okanye ukusetyenziswa kwegunya elisemthethweni kuthi.
Njengeziko laseMelika lemfundo ephakamileyo, ukuqhubekeka phantse kwayo yonke idatha yobuqu kaHodges kuya kwenzeka eMelika. Abatyeleli kule webhusayithi bayavuma ukuba idatha yobuqu ebonelelweyo okanye eqokelelwe kwiwebhusayithi yayo iya kudluliselwa eUnited States, kwaye ngokuqhubeka nokusebenzisa loo webhusayithi, uyavuma kolu tshintsho.
Ukuba unemibuzo malunga nemigaqo-nkqubo yethu ngokubhekisele kwimigaqo yokusebenzisa, nceda unxibelelane nathi kule dilesi ye-imeyilevuma@hodges.edu.